विचित्र दुनियाँ : चाउचाउ मात्रै खुवाएको भन्दै पत्नीसँग डिभोर्स - केन्द्र खबर
विचित्र दुनियाँ : चाउचाउ मात्रै खुवाएको भन्दै पत्नीसँग डिभोर्स
२०७९ जेष्ठ २६ १०:४९
भारतमा चाउचाउ मात्रै खुवाएको भन्दै एक पतिले पत्नीसँग डिर्भोस गर्ने भएका छन् । श्रीमतीले दिनदिनै खानामा चाउचाउ मात्रै दिएको भन्दै श्रीमानले श्रीमतीविरुद्ध डिर्भोसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको एक अदालतका न्यायाधीशले बताएका छन् ।
श्रीमतीले ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनरमै चाउचाउ बनाउँथिन् । श्रीमतीलाई चाउचाउबाहेक अरु केही पकाउन नजान्दा श्रीमान निराश भएका थिए । त्यसपछि आपसी सहमतिमा दम्पती अलग भएका थिए । मुद्दा चलेको समयावधि र सो घटनामा संलग्न दम्पतीको नाम उल्लेख गरिएको छैन् ।
पछिल्लो समयमा अस्वभाविक कारण जस्तैः तरकारीमा पर्याप्त नुन नहाल्ने, विवाहमा उपर्युक्त लुगा नलगाउनु, पत्नीलाई बाहिर नलैजानु आदि विषयलाई लिएर अदालतमा उजुरी बढेका पाइन्छन् । कतिपय घटना त विवाह समारोह सकिए लगत्तै हुने गर्छन् ।
७० वर्षीया वृद्धाले जन्माइन् पहिलो सन्तानः बुढेसकालमा बच्चा जन्माउने विश्वमै पहिलो महिला हुनसक्ने !
विवाह गर्न खड्‌कुँलोमा यात्रा गर्ने भारतीय जोडी !
मनोजले २१ औं पटक शरीरमा जमारा उमारेर सबैलाई चकित पारे
भारतः कपाल छोटो काटिदिएकै कारण सैलुनलाई तीन करोड २० लाख रुपैयाँ जरिबाना
किरणको नम्बर सुरेन्द्रको मोवाईलमा ब्लक !